Xalayaa Afriikaa irraa: Naajeeriyaa - biyya dargaggeettii jaarsoliidhaaf kennamte - BBC News Afaan Oromoo
Filannoon Naajeeriyaaa ergasirna bittaa jalaa walabaa baatee waggaa 20f gaggeeffameera
Xalayaa keenya walitti aansuudhaan gaazexeessaa Afriikaa, gulaalaa ol aanaa gaazexaa Nigeria Daily Trust jedhamu Daan Alii maaliif biyya uummanni isaa walakkaa ol kan ta'u umuriin isaa waggaa 35 gadi ta'e pirezedaantii dulloome biraa filannoo itti aanuuf filata jedcuun barreesse ilaala.
Guyyaa filannoo irratti, kaadhimamtoonni filannoo pirezedaantummaa Naajeeriyaatiif dursaa jiran lamaan, Pirezedaant Muhaammaduu Buhaariifi dursaan garee mormituu Atiikuu Abuubakar umuriin isaanii yeroo walitti ida'amu wagga 148 ta'a.
Kun ammoo seera paarlaamaan biyyattii Caamsaa keessa "Gaggeessuudhaaf baayyees ijoollee miti" jedhuun umurii gara aangoo baayyee guddaa ta'etti dhufuudhaaf umuriin duraan waggaa 35 ta'e gara 30'tti akka gadi bu'een abdii ture dukkaneessa.
Jilli biyyoota Lixaa filannoo Keenyaa irratti akeekkachiisa kennan
Paartiin Afriikaa Kibbaa ANC'n Raamaafosaa filate
Tarreeffama kaadhimamtootaa 76 ta'an yeroo ilaaalaman, hanga tokko dargaggeeyyii kan ta'an akka abbaa qabeenyaa Felaa Durotooyee umuriin isaa waggaa 46 ta'e, maxxansa oduu taora internii Sahara Reporters jedhamurra kan hojjetu Omowalee Sowooree akkasumas barreessaan roga gaazexaa Topee Fasuwaa kan jedhamu lachanuu umurrin isaanii waggaa 47 ta'a.
Haata'u malee kun dhiyeenya kana Gurrndhalaa as as bahan. Amma dorgommiin cimaan kan gaggeeffamu Buhaariifi dursaa paartii biyya bulchaa jiru All Progressives Congress (APC), Mudde dhufu umurin isaa waggaa 76 kan guutuufi dursaa garee mormituu People's Democratic Party (PDP) jedhamu Abubaka kan ji'a dhufu umuriin isaa waggaa 72 galu gidduutti ta'a.
Siyaasni dullooomaa haalaan walitti hidhatee baayyee hidda gadi fageeffataadha waan ta'eef kaadhimamtoota paartilee dulloomaa kanaa ala dhufanii pirezedaantummaadhaaf dorgomuun gara malee ulfaataa ta'a.
'Arka doolaaraa guutuu'
Lammileen Naajeeriyaa filachuuf galmaa'an walakkaa ol ta'an umuriin issaanii waggaa 35 gadidha. kanaaf, yeroo Ebla darbe seera 'Dorgomuudhaaf Baayee Ijoollee Miti' jedhuu duulli taasifamaa turetti dorgomtoonni sagalee uummataa sirrii qabaatan gara aangootti dhufu jedhamee abdatamaa tureera.
Akka komishinii filannootti, duulli filannoo guutummaatti walakkaa baatii Sadaasaa jalqabama.
Duullichis akkuma kanaan duraa, dhimmoota ijoofi barbaachisoo irratti wal falmuu caalaa calliseedhuma akka ayyaanaa kabajuu fakkaachuu mala. Dhimmoonni akka dargaggoota hojii dhabaniif hojii barbaaduu, ykn waanta waadaa galame dhugoomsuudhaaf maallaqa barbaachisu maddisiisuu, fkn akka bu'uuraalee misoomaa Naajeeriyaa dhugoomsuun xiyyeeffannaa barbaada.
Jarreen dulloomoo hanga ammaa ol aan tummaa isaanii agarsisaa bakka jiranitti, qoosaan tokko tokko dhaga'amaa jira. "Dorgomuudhaaf baayyee ijoolledha" hin jiedhamtu garuu " dorgomuudhaaf baayyee hiiyyeessa" jedhamta malee.
Kun kan jedhameefis, kaadhimamtootaa yeroo bakka gara garaa deemanii deggertoota isaanii dubbisanitti arka dolaaraan guuteen jedhama jira.
Kaadhimaa kan baartii biyya bulchaa jiruu APC ta'uudhaan kan dhiyaate Pirezedaanti Buhaarii qofaadha.
Senaaterri duraanii umuriin isaa ganna 46 ta'e Yusuuf Daattii Baabaa Ahmed paartii PDP'tiif kaadhimamaa ta'uu barbaadee ture, garuu sagalee 3,000 keessaa shan qofaa argate.
Kaadhimatoonni kunneen lamaan dargaggoota dorgoman keessa makuudhaanillee sagalee dargaggootaa hawwachuu qabu ture.
Garuu Buhaariin Itii-aanaa isaa Yeemii Osinbajoo kan umuriin isaa 61, of biraa karaatti kan hambise yommuu ta'u Atiikaan ammoo bulchaa biyyaa Anaambraa duraanii kan ture Piiter Obii kan umuriin isaa waggaa 57 of biraa hambiseera.
Dhugaan jiru amma waggoota darban keessa walkeessa hidhannoo godhachuudhaan warreen aangoorra jiran kunneen aangoo dargaggootatti dabarsuudhaan kaadhimamotoota kanaan dura hin ilaalamiin ilaaluu hin barbaanne.
Akkas ta'ee osoo jiruu garuu dargaggoonni walabummaa biyyaa eeguudhaaf lubbuu isaanii kennaa jiru, gibira kaffaluudhaaf carraaqaa dafaqaa akkasumas ogummaa isaanii cimsachuudhaan lammilee biyya isaanii guddisan ta'uudhaa ifaajaa jiru.
Tarii jecha 'umuriin qaroomina' jedhuun of amansiisuun of dagachiisuu danda'u - ykn biyyoota pirezedaantii dulloomoo qaban ollaa jiran kan akka Kaameruun kan Paawul Yaayyaa jaarsi waggaa 84 torban darbe marsaa torbeffaadhaaf mo'ate akkasumas kan Aljeeriyaa biyya Abdellaziiz Boutefliikaa jaarsi waggaa 81 ammas marsaa shanaffaadhaaf walitti aansee mo'achuudhaa bara dhufu dorgomuuf jiru ilaalanii of jajjabeessu ta'a.
Filannoo Laayibeeriyaa: Manni murtii marsaan lammataa akka itti fufu jedhe